Intwana yaseGranary - I-Airbnb
Ihlaziywe ngo-2018, iGranary iyeyesithathu kwiinguqulelo ezintathu ezizodwa zezakhiwo zefama ze-17th Century kumhlaba wembali yakudala yevicarage e-Little Tew ezolileyo, kumda we-Cotswolds. IGranary ibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo, yabucala kwaye etofotofo ukuze isibini sisebenzise njengesiseko sobuvila okanye ukukhangela.
IGranary lutshintsho lwe17th Century Cotswold stone store store, ebonelela ngendawo yokuhlala kumgangatho wokuqala nowesibini.
Izinyuko zangaphandle ezinembono phezu kwamabala ajikelezileyo zikhokelela kumnyango wangaphambili weGranary.
Oku kukhokelela ngqo kwikhitshi / kwigumbi lokutyela elixhotyiswe ngokupheleleyo, elinesinki yaseBelfast, isitya sokuhlamba izitya, isitovu sokungeniswa, i-oveni yombane kunye nazo zonke izixhobo onokuzifuna ukupheka kunye nokutya isidlo; kunye neembono phezu kwegadi enikezelweyo yaseGranary, itafile yokutyela iya kuhlala ngokukhululekileyo ezine.
Izinyuko ezibini, emva koko wagqitha kwizinyuko zangaphakathi ze-oki ukuya kwigumbi lokuhlala elipholileyo elinesitshisi seenkuni kunye nezigodo ezininzi. Ngena esofeni kwaye ulale imini yonke, ubukele umlilo, i-smart tv okanye umamele umculo usebenzisa isixhobo sakho kwisithethi seBose. Ngenye indlela, bhala inoveli yakho yokuqala edesikeni/iphupha lasemini ngelixa usonwabela iimbono phezu kwegadi ebiyelweyo.
Ukuba konke oku kungqina kakhulu, nyusa izinyuko ukuya kubukhulu bukaKumkani, igumbi lokulala elinelinen emhlophe ebekwe kwi-eaves. Kwakhona wabucala ngokupheleleyo kodwa unemibono phezu kwegadi ebiyelweyo kunye noncedo lwasemaphandleni olungqongileyo luqinisekisiwe.
Indawo yokuhlala enewodrophu amanye amanyathelo amabini ukuya kwikhabhathi yokuhlamba impahla, enewasha / isomisi ikhokelela kwigumbi lokuhlambela elitofotofo elinebhafu yentsimbi ekhululekileyo kunye nelondolo ngombono wokugqiba indawo yokuhlala.
Nceda uqaphele ukuba akukho shawari eGranary, nceda ujonge ezinye izintlu zethu ukuba oku kuyimfuneko.
4.99 · Izimvo eziyi-204
Ifikeleleka ngokulula ukusuka eMantla naseMazantsi kodwa ngaphandle kwendlela ebethiweyo, iTew encinci yilali encinci kumda weCotswolds.
Fumanisa ikhadi leposi eligqibeleleyo kwiidolophu kunye neelali zase-Cotswold ezibandakanya iBurford, iStow kwi-Wold kunye ne-Great Tew engabamelwane enezindlu zebhokisi yetshokholethi kunye ne-pub yasekhaya i-Falkland Arms.
Isondele kakhulu, kodwa ikude ngokwaneleyo ukusuka kwiFama yaseSoho kuxhomekeke kwindlela oyibona ngayo.
Ikwindawo entle yokufunda ngakumbi malunga neOxford yezemfundo kunye nembali.
Iintsuku ezimnandi ngaphandle kwiBlenheim Palace.
Olunye unyango lwamagama amakhulu kwilali yaseBicester.
Unyango lwe-spa kunye nokutya okuvela kwifama ekrelekrele kwihlabathi eDaylesford.
Kuninzi ukubona ukuba uyafuna na ukuphuma apho kunye nentuthuzelo eninzi yasekhaya ukuba awufuni.
Siza kuzama ukwamkela iindwendwe zethu kodwa ukuzimela kunye nemfihlo zezona zibalulekileyo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oxfordshire